Rejadii Murrashaxnimo Ee Muuse Biixi Oo God Dheer Ku Dhacday, Tiradda Xubnaha G/Dhexe Ee Uga Soo Xaadiray Subeer Awal Iyo Tirrada Xubnaha Dhabarka U Jeediyay |
Rejadii Murrashaxnimo Ee Muuse Biixi Oo God Dheer Ku Dhacday, Tiradda Xubnaha G/Dhexe Ee Uga Soo Xaadiray Subeer Awal Iyo Tirrada Xubnaha Dhabarka U Jeediyay
Hargeysa(GNN)-Rajadii iyo yididiiladii uu Gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye Md Muuse Biixi Cabdi ka qabey inuu maruun ku fadhiisto kursiga ugu mudan tallada dalka ee Madaxweynenimada ayaa mar keliya quus iyo rajo la’aan isu rogtey ka dib markii xubnaha beesha Subeer Awal ugu jira Golaha dhexe ee xisbiga Kulmiye ay aqlabiyadodii qaadaceen casuumadiisa.
Xaflad qado-sharaf ah oo uu Muuse Biixi maanta ugu sameeyay Green Plaze, xubnaha Golaha dhexe ee Beelaha Subeer Awal, waxa uu weji-gabax kala kulmay markii ay uga yimaadeen 36 xubnood oo kaliya, halka uu filayay in beeshiisa uu aqlabiyadeeda uu ku kaliyaysan doono. Waxa madasha aan ka soo xaadirin oo taabacsan murrashaxiinta kale dhawr iyo afartan xubnood.
Guddoomiyaha KULMIYE, waxa marti-qaadkiisa dhabarka u soo jeediyay Mudaneyaasha Baarlamaanka ee Beelaha Subeer Awal oo tiradoodu dhan tahay 16 Mudane, waxa kaliya oo u yimid saddex Xildhibaan oo kala ah Ibraahim Axmed Haybe, Maxamed Xuseen, iyo Maxamed Baaruud, arrintaasina waxay ku ahayd tumaati kale oo hankiisa dhaawac culus u geysatay. Markii uu arkay in dad badan oo uu quudareynayay inay u yimaadaan ay u jareen ayuu dhalinyarro iyo haween taabacsan xafladii keenay si ay higilka fadhiga ugu buuxiyaan.
Muuse Biixi oo ka cadhooday hungada uu kala kulmay xubnihii Golaha dhexe kaga jiray beeshiisa, waxa uu eedeeyay dad badan oo aan waxba u geysan oo uu ka mid ahaa Maareeyaha Dekadda Berbera Cali Cumar Maxamed (Cali-xoor-xoor) oo marti-qaadkiisana ka soo qeyb galay oo uu sheegay inay ka ololeeyeen.
Guddoomiyaha KULMIYE waxa uu xafladaasi ka jeediyay hadal , baan, hanjabaad iyo beerlaxowsi iskugu jira.Waxaanu xusay inuu haysto aqlabiyadda xubnaha Golaha dhexe, isagoo si xaqiiqadda ka fog uga hadlay dhawr beelood oo uu sheegay inay taageero weyn siiyeen.
1- Waxa uu sheegay inuu Ergadda Beesha Arab Ee Holaha dhexe ka haysto 20 xubnood, hase yeeshee waxa xaqiiqo ah inuu haysto 2 Xubnood oo kaliya.
2- Waxa uu Sheegtay inuu Beelaha Gadabuursi ka haysto 43 xubnood, balse uu ka haysto 14 xubnood oo u badan beel kaliya.
3- Muuse Biixi waxa uu isa siiyay inuu Beelaha Garxajis ka haysto 40 xubnood, balse waxa la socda oo kaliya 4 xubnood.
4- Beelaha Harti waxa uu soo qortay inuu ka haysto 30 xubnood, waxase la xaqiijiyay inuu ka haysto 3 qof oo kaliya oo waliba saddexduba ka tirsan yihiin xildhibaanada Golaha Wakiiladda.
Arrintaasina waxa ay si xoog leh u damaqday oo sida la sheegay aadna uga cadhooday Gudoomiyaha xisbiga Kulmiye , kaas oo tallaabadan ay xubnaha Beesha Subeer Awal ee uu isaga laf ahaantiisu ka soo jeedo kaga baxeen casuumaddii uu u fidiyey. Waxa la xaqiijiyay illaa imika in Golaha dhexe ee KULMIYE oo tiradoodu tahay 412 uu ka haysto kaliya wax aan ka badnayn 70 xubnood.
Geesta kalena waxa uu caawa bilaabeen Taageereyaashii Muuse Biixi inay xubnihii u iman waayay ee Beelaha Habar-awal guryaha ku garaacaan oo ay hanjabaad iyo aflagaado iskugu daraan.